Kushanda ndangariro kudzidziswa mune vakwegura. Zvinoguma nei? | Kudzidziswa Kwekuziva
Pave nekukurukurirana kwenguva refu pamusoro pekubudirira kwekushanda kwekudzidzira kurangarira munzvimbo dzakasiyana siyana (dyslexia, ADHD, vanhu vane huwandu hwekukuvara kwehuropi, chirwere chetsipa uye zviitiko zvine hutano) uye nharo, inoenderera mberi nekuedzwa, ongororo uye meta-ongororo. ichiri kuita senge chiri kumira.
Tsvaga inonakidza yakaitwa muBrazil neBrums inokodzera mune iyi mamiriro uye vanobata pamwe pane vanhu vakuru vane hutano.
Vaongorori vakasarudza kudaro kuyedza mhedzisiro yekudzokorora pfupi kurangarira kudzidzisa (zvikamu zvitatu) uye wozvienzanisa nekudzidziswa kwakafanana asi kwekureba kwenguva (3 zvikamu), ichisara ipfupi kwazvo.
Mapoka maviri evazvipiri vakatorwa kubva kuyunivhesiti muSan Paolo kuBrazil. Boka rega rega raive rakakamurwa kuita zvikamu zviviri: rimwe raiverengerwa kushanda kurangarira kurangarira, rimwe raive nebasa reboka rekudzora (kureva, kuita zviitwa kunze kweiyo yeboka rekuyedza).
Zvese zvidzidzo zvakaongororwa pane zvakasiyana zvekunzwisisa zvinhu zvisati zvadzidziswa, pakarepo mushure uye mwedzi mitanhatu vachipesana kuti vatarise kuchengetedza kwemhedzisiro. Iyo yekuziva, yakataridzika kuongororwa kwakaumbwa seinotevera:
Muedzo we kushanda ndangariro: Kurongwa Kwetsamba uye Nhamba, Kurangarira kweDhive Direct, Kurangarira kweImukati Inofungidzirwa, Direct Course Span e Revers Courses Span.
Muedzo we kugadzirisa kumhanya: Tsvaga Zviratidzo.
Muedzo we mabasa makuru: Yemamiriro ekunze e Stroop bvunzo.
Muedzo we kungwara kwemvura: Kufambira mberi matrices.
Pfungwa yacho yaive yekuona mhedzisiro yekudzidzira kurangarira kudzidzisa pese pese pakubata memory pachako uye pane humwe hunyanzvi husina kudzidziswa zvakananga (mabasa makuru, kugadzirisa kumhanya uye kufunga).
Iri boka raipfuura neiyo pfupi yenyaya yekushanda yekudzidzira kurangarira yaive nayo inowedzera mukushanda kwakayerwa mukushanda kwekuyeuka ndangariro uye muyedzo yemabasa makuru (Semantic Mafurutsi) uye idzi kuvandudzwa dzakachengetedzwa kunyangwe mushure memwedzi mitanhatu; boka rekutonga panzvimbo pezvo rakaratidza kusavandudza mune chero yemiedzo inoshandiswa.
Nezve iro boka rakaiswa pane yakadarika shanduro yekudzidziswa mhedzisiro yacho yaive yakawanda, ichiratidza mune yese bvunzo dzakapihwa (kushanda ndangariro, kumhanyisa mhanyisa, mabasa ehungwaru pamwe nehungwaru), uye yakachengetwa kunyangwe mushure memwedzi mitanhatu; zvakare mune ino kesi, zvakadaro, boka rekutonga, iro rakaiswa zviitiko zvakasiyana pane rekushanda yekudzidzira kudzidziswa, harina kana kuwedzera mune chero bvunzo dzakaitwa.
Yekupfupisa kwazvo yekudzidzira kurangarira kudzidzisa, yakaitwa chete nezvikamu zvitatu - makumi matanhatu zve makumi matatu - makumi mana emaminetsi imwe neimwe, inoita kunge ichiburitsa mibairo inonakidza iyo inopamhidzira kupfuura iyo inoshanda yekurangarira yega. Nekudaro, izvo zvaizodikanwa kuti tsvakiridzo dzakadai se idzi dzitarisewo pane kungangoita mhedzisiro yemhedzisiro yekudzidziswa muhupenyu hwezuva nezuva kupfuura bvunzo dzehuropi.
Zvimwe zvezvikumbiro zvedu
Kunyange zvisiri kunyatsotevera chirevo chakatsanangurwa muongororo yatataura nezvazvo, pawebsite yedu pane mapurogiramu emakombiyuta akawanda akagadzirirwa kudzidzisa memory memory chiratidzo chekutsvagisa zvinokonzerwa nezvimwe zvidzidzo. Pakati peava mamwe maratidziro anoshamisa ePASAT, N-Back uye span, zvese zviri zvekutaura, zvinoonekwa uye zvinoratidzwa. Isu saka tinokupa zano kuti uende kune yakakodzera chikamu che mutambo Center kuvaona vese.
Kushanda ndangariro: zviri nani kuisimudzira nekukurumidza?
Kudzidziswa kushanda memory kuti uwedzere kungwara. Inoshanda zvechokwadi here?
Kuomerwa nekushanda kwekuyeuka (uye kwete chete). Zvekuita kuchikoro
Verbal kushanda ndangariro uye nekukurumidza kudana mazita se zviratidzo zve dyslexia muvadzidzi vekoreji
Kunzwisisa rugwaro pamusoro pekuverenga nekukurumidza: izwi rekutaura remusoro
Kudzidziswa kwekuziva mune MCI: 3 nzira dzemakomputa dzakaenzaniswa
Dementia uye kukurudzira kwekuziva. Nzira dzakasiyana dzakayenzaniswa
Dingindira - kuyeuka kwekudzidzira uye kudzidza: iyo ongororo
BVS - Makosi. Bhatiri Yekuongorora kweVonekwa uye Spatial Memory: iyo ongororo
Brum, PS, Borella, E., Carretti, B., & Sanches Yassuda, M. (2018). Kutaurisa kushanda ndangariro kudzidziswa muvakuru vakuru: kuferefetwa kweiyo mhinduro mhinduro. Kukwegura & hutano hwepfungwa, 1-11.
brain training, kushanda ndangariro, kukurudzira kwekuziva, kushanda kudzidzisa ndangariro
Kushanda kudzidzisa ndangariro muvakweguru. Zviguma nei?2019-11-032020-02-22http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngKudzidziswa kwekuzivahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2019/11/training-di-memoria-di-lavoro.png200px200px
Mutauro: kusiyana pakati pekushandura uye kuwedzeraZvinyorwa, Mutauro
Ko nhanho yedzidzo inokanganisa huwandu hwehungwaru here?Zvinyorwa, Ungwaru, Neuropsychology